कार्तिक ०४, २०७५ बिगुल न्यूज- SG
कावासोती, ४ कात्तिक :पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिका–११ अरुणखोलामा बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६ पुगेको छ । पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचारका क्रममा गुल्मी हस्तचौर गाउँपालिका–२ बस्ने ३५ वर्षीय तिलक विष्टको ज्यान गएको हो । आज बिहान सो दुर्घटना हुँदा दुर्घटनास्थलमा पाँचजनाको मृत्यु भएको थियो ।
प्रकाशित : आइतबार, कार्तिक ०४, २०७५१०:१४
अस्ट्रेलिया पुगेका ‘डन’ गणेश लामालाई मिल्यो यस्तो सम्मान ! अस्ट्रेलियामा के गर्दैछन् लामा ?
दुर्घटनाको छानविन गर्न तत्काल आयोग गठन हुने, घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने – प्रधानमन्त्री
हिजो राति मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु !
मनास्लु हिमाल आरोहण गरी फर्किदै गर्दा चेक नागरिक बेपत्ता
१९ वर्षपछि फेला परे फरार अभियुक्त!
जापानको अवैतनिक वाणिज्य दूतमा श्रेष्ठ नियुक्त